Iindaba eNigeria nangaphaya: uLinda Osifo uthenga i-Mercedes Benz + nangakumbi
NUmlingisi we-ollywood uLinda Osifo uthenga i-Mercedes Benz, izigwebo zeNkundla u-Olisa Metuh, uVanessa uhlawula uKobe noGigi kwisikhumbuzo. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. Umlingisi weNollywood uLinda Osifo uthenga iMercedes Benz GLE 450 Coupe
Intsha kaLinda Osifo Mercedes Benz
Umlingisi weNollywood, Linda Osifo uzenzele iMercedes Benz. Inkwenkwezi ye-movie yaya kumabali e-Instagram ngoMvulo, ngoFebruwari 24, 2020, apho abelana ngothotho lweevidiyo zemoto zamva nje kwigaraji yakhe.
Ngokucacileyo onwabile ngongezo lwakhe olutsha, uLinda unokubonwa ekhwaza kunye nabahlobo bakhe abangakwaziyo ukulufihla uvuyo lwabo. Inqwelo-mafutha kaLinda Osifo yakutshanje ye-Mercedes Benz GLE Couple 2016 450matic eqikelelwa ukuba ikwi-N4M ukuya kwi-N20M.
Umlingisi omnandi ujoyine uluhlu lwee-celebs ezizenzele iimoto ezibizayo kule minyaka imbalwa idlulileyo. Sisathetha ngezipho ezibizayo, emva ngo-2019, umlingisi wazakhela indlu entle kakhulu.
2. Izigwebo zenkundla uMetuh wagwetywa iminyaka esixhenxe
Inkundla ePhakamileyo yase-Abuja ngolwesibini igwebe owayesakuba ngu-Nobhala weSizwe ku-Peoples Democratic Party, U-Olisa Metuh, ukuya kwiminyaka esixhenxe evalelwe kwezityholo zorhwaphilizo ngokubhekisele kwimisebenzi yakhe yangaphambi kokhetho lukamongameli luka-2015 elahlelyo neqela lakhe.
Lungisa Okon Abang ukuhambisa isigwebo kwityala elithathe ngaphezulu kweyure ezintandathu kugwetyiwe u-Metuh kula matyala asixhenxe, kubandakanya nokufunyanwa ngobuqhophololo kuka-N400m kwiOfisi yoMcebisi woKhuseleko lweLizwe ngo-Novemba wonyaka ka-2014 kunye nokusetyenziswa kwemali yemisebenzi yezopolitiko ye-PDP kunye neyakhe Iinjongo.
Le nkundla ikwagwebise uMetuh ngokuthengiselana ngesixa semali esiyi- $ 2M ngaphandle kokuya kwiziko lezemali.
3. Iqela elilawulayo laseMalawi lenza isivumelwano phambi kwephulo elitsha
Umongameli Peter Mutharika wenze isivumelwano nomntu owayekade elilawula
UMongameli waseMalawi UPeter Mutharika's Umbutho olawulayo weDemocratic Progressive Party (i-DPP) ungenelele kwimanyano ne-United Democratic Front (UDF). Oku kuza ngaphantsi kweeyure ezingama-24 emva kokuba ipalamente ipasile umthetho, obeke umhla we-19 ku-Meyi njengosuku lonyulo olutsha emva kokuba inkundla ibhengeze uloyiso lukaMnu Mutharika kunyulo lonyaka ophelileyo.
I-UDF, eyayilawula iMalawi phakathi konyaka we-1994 nowe-2004, yeyona yesithathu kwindawo enkulu, izihlalo ezili-10 zepalamente. I-DPP inama-61 kunye neqela eliphambili eliphikisayo iMalawi Congress Party 55. I-UDF ikhokelwa Atupele MuluziUnyana walowo wayesakuba nguMongameli Bakili Muluzi.
U-Atupele Muluzi usebenze kurhulumente kaMongameli Mutharika ngaphambi konyulo lukaMeyi ophelileyo, iNkundla yoMgaqo-siseko eyitshabalalise kwinyanga ephelileyo ngenxa yezitenxo.
4. I-Mosque yatsha umlilo njengoko uqhankqalazo olunobundlobongela luqhubeka ngaphesheya kweNew Delhi
Indoda ibethwa ngexesha lokuxabana phakathi kwabantu abaxhasa umthetho wobumi obutsha kunye nabachasayo umthetho eNew Delhi
I-mosque itshiswe ngomlilo kwikomkhulu lamaIndiya eNew Delhi njengoko uqhanqalazo olunobundlobongela luqhubeka kulo lonke eli dolophu ngenani labantu ababhubhileyo lenyuka laya kwali-11.UJai Shri Ram", Iguqulelwe ku"Duma uNkosi Ram", Sijikeleze isikiti esitshisayo kwindawo ye-Ashok Nagar eyikomkhulu ngoLwesibini.
Umboniso wevidiyo ekwabelwana ngayo kwimithombo yeendaba zentlalo ibonise ihlokondiba linyukela phezulu kwi-minaret ye-mosque apho bazama ukutyala iflegi yesafron. Amajelo osasazo anike ingxelo yokuba iivenkile ezikule ndawo bezijolise nakwisiqhu.
Amapolisa anyanzelisa umhlangano kwiindibano ezinkulu kumantla-ntshona e-Delhi njengoko iingxelo zavela ngokugibisela amatye kunye nolwakhiwo olungakumbi luvutha.
5. UVanessa Bryant ukhokelela kwisikhumbuzo seemvakalelo kuKobe Bryant kunye nentombi yakhe uGianna
Intsomi yeBhola yeBhasikithi uMichael Jordan (ngasekhohlo) unceda uVanessa Bryant (ekunene) ukusuka kwinqanaba emva kwentetho yakhe eshukumayo
UVanessa Bryant unike isipho eshukumayo kumyeni wakhe ongasekhoyo, ibali le-basketball Kobe Bryant, kunye nentombi UGianna kwinkonzo yesikhumbuzo eLos Angeles.
Owayesakuba ngumdubuli weLos Angeles Lakers uBryant, oneminyaka engama-41 kunye noGianna, ali-13, babephakathi kwabantu abalithoba ababhubhe kwingozi yehelikopta kwinyanga ephelileyo. Amawakawaka abalandeli, abantu abadumileyo kunye neenkwenkwezi ze-basketball bezimase umsitho wangoMvulo kwiziko leStaples.
UVanessa waqala ngokukhumbula intombi yakhe, ebizwa ngokuba 'nguGigi', njengomphefumlo “omnandi nowothusayo,” owayekuthanda ukubhaka kunye nokudanisa, nokuba ngumdlali webhasikidi onetalente. UVanessa wambiza umyeni wakhe ongasekhoyo, awayehlala naye eneminyaka eli-17 ubudala, “umyeni wakhe owayengumyeni” wakhe kwaye wakhumbula ukuthanda kwakhe iimovie zothando kunye nokuba wayengutata "wokuphosa izandla" kuye.
Beyonce wavula umsitho, obizwa ngokuba “ngumbhiyozo wobomi”, ngokucula XO, xa wathi "Ndilapha kuba ndiyamthanda uKobe kwaye le yenye yeengoma zakhe azithandayo", Ngaphambi kokudlala kwakhona Halo.
Uhlobo Rave Februwari 25, 2020